ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ LED မီးလုံး၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အပူအပူပျံ့နှံ့မှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ LED မီးခွက်၏အပူပျံ့နှံ့မှုသက်ရောက်မှုမကောင်းလျှင်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် LED ရေတိုင်ကီ၏အခန်းကဏ္သည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် LED မီးများ ဖွဲ့စည်းမှုကို LED၊ အပူဖြန့်ကျက်တည်ဆောက်ပုံ၊ ယာဉ်မောင်းသူနှင့်မှန်ဘီလူးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူ၏အပူဖြန့်ကျက်တည်ဆောက်ပုံ၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာ LED အပူစုပ်စက်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် LED radiators များ၏ဘုံအပူဖြန့်ဖြူးမှုနည်းလမ်းများစွာကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
1. LED အပူစုပ်-အလူမီနီယံအပူစုပ် fins များ
Aluminium radiating fins များသည် LED radiators များအတွက်အသုံးအများဆုံးအပူဖြန့်ဖြူးရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
2. LED အပူစုပ်-အပူလျှပ်ကူးပလပ်စတစ်အခွံ
အပူလျှပ်ကူးသောပလပ်စတစ်အခွံသည်အလူမီနီယံအလွိုင်းကို LED insulation နှင့်အပူဖြန့်ထားသောပလတ်စတစ်များနှင့်အစားထိုးပြီးအပူဖြန်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အပူဖြာထွက်သည်။
၃။ LED အပူစုပ်မျက်နှာပြင်-ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်း
Surface radiation ကုသမှုသည်အပူဖြန့်ဖြူးသည့်အပူဓာတ်ကို LED မီးခွက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှရောင်ခြည်သုတ်လိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။
၄။ LED ရေတိုင်ကီ - လေအရည်စက်များ
Air fluid mechanics သည်အပူပြန့်ကျဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန် convective air ကိုဖန်တီးရန် LED မီးအိမ်များပုံသဏ္န်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးအပူဖြန့်ထုတ်သည့်နည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်များသည် LED radiators များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောအဓိကအပူဖြန့်နည်းလမ်း ၆ ခုဖြစ်သည်။
LED အပူပြန့်ပွားမှုပြဿနာအချို့၏အနှစ်ချုပ်၊ led မီးလုံး၏အပူကိုဖြန့်ကျက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း၊ led မီးလုံး၏အပူပြန့်ပွားမှုပြဿနာ၊ အဘယ်အရာဖြစ်လျှင် led မီးပုတီး၏အပူဖြန့်ကျက်မှုမကောင်းလျှင်ဘာဖြစ်မလဲ။ led lamp bead ၏အပူဖြန့်ထားသော insulated၊ led lamp ၏အပူဖြန့်ဖြူးနည်းနှင့် led lamp bead ၏အပူဖြန့်ကျက်ဧရိယာ၊ Self-made led lamp bead heat dissipation, led lamp bead heat dissipation silicone အဆီ၊ 1w ဦး ဆောင်သောမီးလုံးပုတီးသည်အပူကိုပျောက်ရန်လိုသည်၊ led မီးလုံးပုတီးကိုအပူဖြန့်ခြင်းဒီဇိုင်း၊ led မီးလုံးပုတီးအပူများ 1w ကိုဧရိယာမည်မျှ၊ led မီးလုံးပုတီးအပူဖြန့်ခြင်းလူမီနီယံပန်းကန်အပူချိန်၊ led မီးလုံးပုတီးအပူဖြန်တွက်နည်းနှင့်ပုံသေနည်း၊ LED မီးလုံးပုတီး အပူဖြန့်ဝေမှုသည်ကြီးမားသည်၊ LED မီးလုံးပုတီးအပူဖြန့်ခြင်းအထူး၊ led မီးလုံးပုတီးဂဟေဆော်ခြင်းအပူချိန်နှင့်အချိန်
900w Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Led Floodlight 30w , Philips က 3030 Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Ceiling Led Panel Light , Tri-Proof Light Lighttip , Led နေရောင်ခြည် Rechargeable ရေလွှမ်းမိုးအလင်း,